पुरुषको खराब यौन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने यी चार लक्षण - Hamro Najar
आज: २०७९ अषाढ १२, आईतबार
८०१ पटक पढिएको
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण ९, शनिबार (११ महिना अघि)
जब सेक्ससँग सम्बन्धित समस्याको कुरा आउँछ तब पुरुष सधैं यो कुरा कसैलाई पनि भन्न नपरेपनि हुन्थ्यो भनेर सोच्ने गर्छन् । डाक्टरलाई आफ्नो समस्या भन्नबाट हिच्किचाउँछन् । तर डाक्टरले भने यौन स्वास्थ्यलाई गम्भीरताका साथ लिन सल्लाह दिन्छन् । किनभने वास्तवमा यसले हाम्रो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।
दुर्भाग्यवश नेपालसहित संसारका थुप्रै देशमा यौन स्वास्थ्यबारे कुरा गरिँदैन । सेक्सका चर्चित विशेषज्ञले पुरुषले आफ्नो यौन स्वास्थ्यबारे समय हुँदा नै जानकारी भएको खण्डमा मात्रै यसको उपचार सम्भव भएको बताउने गर्छन् । एक एन्ड्रोलोजिस्टले यौनसम्बन्धि रोगबारे पत्ता लगाएर यसको उपचार गर्न सक्छन् ।
एन्ड्रोलोजिस्ट एक यस्ता दक्ष युरोलोजिस्ट हुन् जसले पुरुषमा बाँझोपन र यौन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीरतालाई बुझ्न सक्छन् । विज्ञका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिमा यौनसम्बन्धि यी चार प्रकारका समस्या महसुस भइरहेको छ भने उनीहरुले तुरुन्त एन्ड्रोलोजिस्टलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि यौन क्रियाकलापपछि तपाईंको शीघ्रपतन भइरहेको छ भने तपाईं प्रिमेच्योर एज्याकुलेशनद्वारा पीडित भएको हुनसक्छ । यो समस्या धेरैजसो कम उमेरका नौजवानमा देखिने गर्छ । यद्यपि, यो समस्या कुनै पनि उमेर समूहमा देख्न सकिन्छ ।
यूरो एन्ड्रोलोजिस्ट्सका अनुसार प्रिमेच्योर इज्याकुलेशन बढी उमेर भएकाहरुमा इरेक्टाइल डिसफङ्सनको वार्निङ साइन पनि हुनसक्छ । यसले मानिसहरुमा एन्जाइटी डिसअर्डरको चेतावनीको कार्य पनि गर्नसक्छ ।
यौनइच्छामा कमीको अर्थ यौनको विषयमा तपाईंको इच्छा कम भइसकेको छ । यो समस्या पुरुषको हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको कमीसँग पनि सम्बन्धित छ । वास्तवमा शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको सम्बन्ध हाम्रो सेक्स ड्राइभ, स्पर्म प्रोडक्सन, मांसपेशी, कपाल र हड्डीसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
डाक्टरका अनुसार टेस्टोस्टेरोनको कमीले मानिसको शरीर र मुडलाई प्रभावित गर्न सक्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी वा सम्बन्धमा समस्या यौनइच्छाको कमीका कारण पनि हुनसक्छन् । यसबाहेक मधुमेह, उच्च रक्तचापसमेत एन्टिीडिप्रेसेन्टजस्ता विभिन्न प्रकारका उपचारले पनि यस्तो समस्या झन् बढाएको हुनसक्छ ।
बाँझोपनमा पुरुषले करिब ४० देखि ५० प्रतिशत योगदान दिने गर्छन् । गर्भधारण गर्न अयोग्य हुनुका थुप्रै प्रमुख कारण हुनसक्छन् । असन्तुलित हर्मोन र सेक्सुअल डिसफङ्सनसमेत थुप्रै कारणले पुरुष बाँझोपनको शिकार हुनसक्छन् ।
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने इरेक्सन तपाईंलाई प्राप्त गर्न र त्यसलाई कायम राख्न कठिनाई हुन्छ भने तपाईं इरेक्टाइल डिसफङ्सनद्वारा पीडित हुनसक्छन् । यस्तो समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब मानिसको गुप्ताङ्गसम्म रक्त सञ्चार राम्रो हुन सक्दैन ।
थुप्रै पटक त यो समस्या शरीरिक अवस्था, मुटुजन्य रोग, थाइराइड बिग्रँदा, मधुमेह र हाइपरटेन्सनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ । डाक्टरका अनुसार यो समस्या एन्जाइटी, स्ट्रेस र डिप्रेसनजस्ता मानसिक अवस्थासँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ ।
३६ बर्ष अगाडी महाविर पुनका कल्पना, रेडियोमा समाचार सुनेर रकेटको चित्र, शिक्षकको तलबले रेडियो किन्न आँट आएन
किन हामी डरलाग्दो सपना देख्छौं ? आखिर किन यस्तो हुन्छ ? डरलाग्दो कारण……
राति ढिलो खाना खाँदा आउने ५ खतरा
त्रिवेणी हत्याकाण्डकाे निन्दा,दाेषी उपर कार्वाही गर्न एमाले अनेमसंघ रुकुम पश्चिमकाे ध्यानाकर्षण
कसरी मिलाउने खानपानमा सन्तुलन
वडा नं.१८ का अध्यक्ष वर्माले पदभार ग्रहण गरे
भरतपुर महानगर मेयरमा रेनु दाहाल भारीमतले विजयी